Sudhayo Waa Sudhayoo Halgan Saakimimayso So,o ummbay ka Rabtaa, – Rasaasa News
Inta aanan bilaabin qormadan aan casharka ugu dhigayo sudhayada halganka damacday in ay dabar goyso, waxaan isku dayi in aan iftiimiyo halganka ay wado Jwxo iyo halyeeadii u hiiliyey iyo sidda ay sudhayadu ugu oon baxday halganka.
Jwxo in ay ka hirgasho dalalka reer galbeedka waxaa suurto galiyey Ilaahay dhawr xubnood iyo Eebe naxariistii Jano ha siiyee Professor Cabdiraxmaan Xaaji Macow, oo dalka Jarmalka yimid sanadiihii 1960s, waxaa uu ka soo jeedaa qoys caan ka ah guud ahaan ummada Somalida, asal ahaana ka soo jeeda degaanka Qalafe oo ka tirsan dhulka Somalida Ogadeeniya. Waxaa tacliin ku qaatay dalalka Talyaniga, Maraykanka iyo Jarmalka kolkii uu qaatay shahaadadda Phd, waxaana uu noqday Professor wax ka dhiga Jamacadaha dalka Jarmalka iyo Maraykanka.
Hadaba sanadihii 1990, ayey dhawr xubnool oo ah rag ka tirsanaan jiray ururkii dhalinyaradu waxay yimaadeen dalalka Yurub waxayna bilaabeen dhaqdhaqaaq ay doonayeen in uu dhalo Jwxo. dhalinyaradu waxay ahaayeen dad qaxooti ah wax qabadkooduna waa uu yaraa, waxayna u habar wacdeen professor Cabdiraxmaan oo asal ahaan ka soo jeeday Somalida Ogadeeniya aadna waxaa uu professerku ugu qancay fikirka saliimka ah ee ay wateen xubnahani. Xubnahan waxaa ka mid ahaa Dr. Maxamed Sirwxoaad Dolal, Cabiraxmaan Shaanqe, Axmed Nur, Axmed Cabdi xukun, Cabdulahi Maxamed Sacdi iyo qaar kale.
Professor Cabdiraxmaan Xaji Macow waxaa uu balan ku qaaday in uu irid walba u furo dhalinyarada iyo qadiyada Somalida Ogadeeniya, Professor Cabdiraxman waxaa kale oo uu balan ku qaaday kalana dardaarmay in wiilashiisa wiilka ugu wayn uguna muddo karsan uu kula dardaarmi in uu u hiiliyo waxna u qabto qadiyada Somalida Ogadeeniya, Sidaasina waxaa halganka Somalida Ogadeeniya soo dhexgalay Sallaxudiin C/man Xaaji Macow oo ka da,a yar aabihii.
Engineer Salaxudiin C/man Xaaji Macow waxaa uu bilaabay in uu wax u qabto qadiyada Somalida Ogadeeniya isaga oo dhinac iska dhigay danihiisii shakhsiyadeed, waxaana uu kolkiiba awooda saaray in uu wax ka qabto dhinaca warfaafinta [media]. Waxaa uu soo saaray kolkii ugu horeysay taariikhda Ideecad madax banaan oo ku hadasha codka Xoriyada ee Ogaden [this is radio freedom voice of Ogaden] waxay ahayd markii ugu horeysay ee laga maqlo hawada sanadkii 1996 nin og iyo nin aan ogaynba waxaa soo saaray Engineer Salaxudiin Xaaji C/man Xaaji Macow oo ku soo saaray magaca Engineer Salhudiin A/man haji Mao. Waxaa uu ahaa ninkii Furay Bogga Internetka ee Ogaden.com, oo ay Jabhadu u isticmaali jirtay fidinta wararka [Media]. Waxaa kale oo uu kolkii ugu horesay hindisay soona saaray calaamadaha ay qaadataan xubnaha ururka Jwxo ee ay ku dhajistaan jeebka dushiisay iyo waliba khariirada Ogaden oo laga sameeyey maar. Waxaa kale oo uu furay Khasnada Jabahada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya oo awooday in ay meel qudha ku soo ururto qaraamaadka ay bixiyaan xubnaha ururku, waxaa kale oo uu ahaa soo saaraha jaraa,idkii Ogaden Mirror [Ogaden mirror] oo ka soo bixi jiray saddexdii billodba mar dalka jarmalka loona qaybin jiray dhamaan dalalka ay taageerada ku lahayd Jwxo. Salaxudiin waxaa uu ahaa ninka Alifay ee diyaar gareeyey una soo saaray in ay labis xidhato Cjwxo, Waxaa kale oo uu ahaa ninkii soo iibiyey rakaaladii ay ugu horeeyey ee ay Jwxo yeelato kuwaas oo qaar ka mid ah ay wali jiraan, ma dhaafee ninkii geeyey gudahana Ogadeeniya waxaa uu ahaa Cabdiqaadir Cabdulahi Shuun.
Salaxudiin waxaa uu ahaa ragii ugu horeeyey ee galay golaha dhexe Jwxo, waxaa kale oo salaxdiin lagu xusuustaa in uu ahaa saldhiga Jwxo ee dalalka reer galbeedka, waxaa isaga magiciisa ku yimid inta badan xubnaha Jwxo ee jooga dalalka reer galbeedka isga oo u soo saari jiray warqada dalk ku galka. Salaxudiin waxaa weeye wakiilka afrikada madow ee dalka Jarmalka, waxaana uu sanad walba la kulmaan dhamaan madaxda aduunka cidii uu doono waayo waxaa uu xubin joogto ah ka yahay naadiga siyaasiyiinta aduunka.
Salaxudiin waan nin dabcasan [hamble] oo aad iyo aad u dabeecad wanaagsan, waa nin aan jeclayn khayaanada iyo wax is dabo mariska, waxaa uu aad u jecel yahay sharciga in lagu dhaqmo, Engneerku ma aha nin qabyaalad yaqaan waa nin ay u siman tahay ummada Somalida Ogadeeniya. Salxudiin waa nin dhawra Axdiga oofiyana dacar hadii uu ka khadhaadh yahay, arimahani waxaa ay ka mid yihiin arimihii isaga iyo Eebe ha u naxariistee halgame Dr. Maxamed Sirad Dolal oo ay og tahay ummada Somalida Ogadeeniya meesha uu ka taagnaa halganka ummada Somalida Ogadeeniya.
Dr. Dolal iyo Eng Salax waxaa ay ku heshiis ahaayeen daacad u ahaanshaha halganka ay wado Jwxo, waxaana ay saaxiibadooda sudhayada ahaa isku waayeen la jiifiyaana banaan. Halganka ay wado Jwxo waxaa waday oo heerkan ay maanta taagan tahay soo gaadhsiiyey xubnah uu ka midka yahay Engineerku, inkasta oo ay meelo xun xun isu taagtay kooxda sudhayadu iyaga oo labo kaliya ahaa oo ay ka mid ahyad qabyaaladu hadana marna mayna suurto galin in laga leexiyo hadafkoodii ahaa in ay wax walba ka hormariyaan Xoreynta Ogadeeniya.
In kasta oo ay ummada Somalida Ogadeeniya iyo Engineer Salax wayeen hhalgamaa qaali u ahaa dalka iyo dadkaba, hadana saalxa waxaa uu u taagan yahay in uu sii wado halganka xaqa ah ee uu wax walba ku waayey. Waxaana isaga oo kaashanaya xubnaha ururka iyo shacabka geesiyiinta ah ee Somalida Ogadeeniya uu ku kalsoon yahay in uu sutida u qabto, cid alaale cidii is tidhaahda dhibaatee halganka iyo ummada Ogadeeniya, waana taas mida uu u joogo North Amerika.
Gabagabadii, waxaan u sheegi lahaa kuwa Sudhayada halganka ku ah ee iyagu u abuuran cayda iyo afxumaynta, ma oga waxa ay Jwxo tahay iyo meesha lala soo maray kaliya waxaa ay arkeen Jwxo-shiil iyo qaraabadiis oo hoolal isugu yimaada sheegtana Jwxo, waxaanse ku waanin lahaa in ay arkaan oo uu ilaahay tuso, halgame yaalka xabada lagu dhufanayo iyo hantida Dubai lagu uruursaday.
Hadiise ay hadal xumada iyo qabyaalada joojin waayaan oo laga leexdo halgankii ay Jwxo waday waxaan filayaa in aan nina garac ahayn.
W/Q: Khaliif Ismaaciil
Waa inoo Qormadda Labaad iyo Sudhayo ….